Ciidamada XDS oo howlgallo ka wada deegaanka Lambar 50 ee Sh/Hoose – Radio Muqdisho
Ciidamada XDS oo howlgallo ka wada deegaanka Lambar 50 ee Sh/Hoose
Wararka laga helaayo deegaanka Lambar 50 ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegayo in cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda oo garab ka helayo kuwa AMISOM ay howlgallo amniga lagu xaqiijinaayo ka sameeyay deegaanno ka tirsan gobolkaas.
Saraakiil ka tirsan ciidamada howlgalka ka wado deegaanka Lambar 50 ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen 10 ruux oo la tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin nabad diidka Al-shabaab, waxa ayna xuseen in ay sii wadi doonaan howlgallada inta laga xaqiijinaayo amniga islamarkaana laga suulinaayo haraadiga nabad diidka ee ku dhuumaaleysanayo deegaanada uu ka arimiyo maamulka Shabeellada Hoose.
Saraakiisha ayaa sidoo kale shacab weynaha ku dhaqan deegaanada gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ugu baaqeen in ay kala shaqeeyaan amniga si looga hortago qatarka kooxaha qaswadayaasha ah ee ku howlan carqaladeynta amniga iyo kala danbeynta.
Shalay ayey aheyd markii maleyshiyaad ka tirsan ururka Al-shabaab ay dagaal ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaanka Lambar 50 ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana halkaasi ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada iyo dadkii shacabka ahaa ee ka agdhawaa goobta dirirtu ka dhacday.
Mas’uuliyiinta wasaaradda Shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka tacsiyeeysay geerida Cali Dheere
Madaxda wasaaradda arrimaha dibadda oo ka tacsiyeeysay geerida Marxuum Cali Dheere